6 kuverenga pamwe nenyaya dzinoverengeka uye yakawanda chando | Zvazvino Zvinyorwa
Sinou, chando uyezve chando. Ndo izvo zvatinoona zvakanyanya mumazuva ano egore izvo zvakatanga zvine simba uye nekutonhora kwakawanda hazvo. Inenge nyika yese iri pasi payo uye inoiswa, nekuti hapana imwe sarudzo, kugara pamba. Kuita? Tsvaga bhuku rakanaka uye verenga. Uye kana iwe uri anoda chando, nakidzwa kunyanya uye zvakare nemabhuku iwayo. Saka panoenda imwe kusarudzwa kwemazita matanhatu nechando chakawanda: 3 kubva kuvanyori venyika, Enrique Laso, Julio Llamazares naJavier Castillo, uye 3 kubva kuNordics, Camilla Läckberg, Samuel Bjørk naJo Nesbø.
1 Chando chakasviba - Enrique Laso
2 Musikana weChando - Javier Castillo
3 Ndangariro yechando - Julio Llamazares
4 Snowstorm uye Almond Kunhuhwirira - Camilla Läckberg
5 Mukomana ari muChando - Samuel Bjørk
Sinou yakasviba zvakanyanya - Enrique Laso
Un bhenji yekuzvitsikisa-wega, nyanzvi mu marketing, nemamirioni ebook akatengeswa pasirese mumitauro gumi nematanhatu, uye mugadziri wenyaya dzinoverengeka dzemanyowani anotarisa iyo Mumiriri weFBI Ethan Bush, Enrique Laso akatisiya nemakore 46 chete apfuura anenge matatu. Iri zita ndiro yechitanhatu yeakakurumbira akateedzana uye anotaurira kuferefetwa kwaBush, akatamisirwa kune vanogara vanhu Montana, pa mhondi uyo atouraya majaya mashanu.
Musikana wechando - Javier Castillo
Castillo ndechimwe chirevo uye chishambadziro chinoshamisa chaakawana neruzivo rwake rwekutanga Zuva iro pfungwa dzakarasika, kwavanotevera Musi wakarasika rudo Zvese zvakaitika na Miranda Huff uye iri rekupedzisira zita.
Gara muNew York mu 1998 uye panguva yekutenda. Ikoko musikana Kiera Templeton anonyangarika uye gare gare mumwe munhu anowana tambo dzebvudzi pedyo nehembe dzaaive akapfeka. Mukusvetukira ku 2003, uye pazuva iro Kiera angadai akasvitsa makore masere, vabereki vake vanogamuchira chinoshamisa pasuru: tepi yeVHS ine kurekodha kweminiti-kureba kweKiera ichitamba mune isina kujairika kamuri.
Tarisa Zvinokanganisa, mudzidzi we utapi venhau, tanga a kuferefetwa kwakafanana yechiitiko uye anoona kuti hupenyu hwake nehwaKiera hwazara zvisingazivikanwe.
Ndangariro yechando - Julio Llamazares
Yakabudiswa mu 1982 uye ndizvo rechipiri bhuku zvakanyorwa naJulio Llamazares. Zvanga zva Wemubhadharo weNyika weBhuku rakanyanya Kugadziridzwa 2020. Nenzwi repedyo uye zvine mutsindo, munyori anoshandisa iwo akarasika uye akawanikwazve masisitimu mundangariro yake uko pasina kushaikwa kwechando, mhuka kana kunyarara kwemakomo.
Dutu rechando uye hwema hwemaarumondi - Camilla Läckberg
Uye isu tinoenda neavo vanoziva zvakanaka nezve chando, chando uye chena chando kwese kwese: maNordics. Isu tinotanga nemunyori anodarika anozivikanwa, wechiSweden Camilla Läckberg, uyo nemitezo yake Mhosva dzeFjällbacka, atengesa makopi anopfuura mamirioni makumi maviri nematatu pasirese. Iyi ndiyo imwe yemazita ake, akaiswa paKisimusi, uye ayo zvakare anosanganisira 4 pfupi nyaya, yakazvimiririra asi iri munzvimbo imwechete saFjällbacka uye mavara ake.
Mukomana ari muchando - Samuel Bjørk
Akanamatira imomo maNorwegi, mamwe madzimambo echando, chando, uye akanaka ematsotsi. Izvi zve Samuel Bjork ndiro zita rechitatu mune akateedzana achitarisa mapurisa maviri akaumbwa nemhare Holger Munch uye vakangwara asi vanonetsa Mia kruger. Vaviri vachatarisana nemumwe wevanonyanya kunetsa mhondi dzinouraya, iyo inosarudza vayakabatwa zvachose zvachose.
Iye Snowman - Jo Nesbø
Tinopedzisira ne Nesbø, Eheka. Zita rake rakakurumbira, pamwe, uye chenomwe yeakateedzana e12 ayo anototungamira kune ake akarohwa zvakanyanya uye chidhakwa kumashure izvo zvakanaka zve Harry hole. Iyo ingangove zvakare inofungidzirwa kwazvo uye ine imwe yeayo magumo anoshamisa ndiwo marimi eimba.
Ivo vaive vakatadza zvachose ne kugadzirisa firimu ivo vakamuitira, uye yake yepakutanga nyaya yemapepa zvirokwazvo yakakosha zvakanyanya. Mariri, Harry Hole achafanirwa kuongorora a akateedzana kuuraya kwevakadzi munharaunda yayo murume wechando anogara achionekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 6 kuverenga ine dzakasiyana nyaya uye yakawanda chando
Munguva yechando, Luis Roso anogona kunge ari pane urwu runyorwa.
Runyorwa rukuru, "Musikana ari muChando" yakabata pfungwa dzangu uye zano rayo rinoratidzika kunge rinonakidza kwandiri.